Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada S. Ogadenia ee Denmark oo Lakulmay Madaxa Baarlamaanka Wadanka Denmark
Jaaliyada S. Ogadenia ee Denmark oo Lakulmay Madaxa Baarlamaanka Wadanka Denmark
Waxaa todobaadkan dhexdiisa kulan heersare ah kudhexmaray Gudoomiyaha Golaha Baarlamaanka wadanka Denmark Mr. Mogens Lykketoft iyo wafti kasocday Jaaliyada Somalida Ogadenia ooy weheliyaan xubno kamid ah Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Somalida Ogadenia ee OYSU. Kulankan oo kadhacay xarunta uu Baarlamaanka Denmark kuleeyahay caasimada Copenhagen ayaa ahaa mid siwanaagsan loosoo agaasimay, waxaana waftigii Jaaliyada Ogadenia loosoo dhaweeyay si diiran.
Kulankan ayaa looga wada hadlay qadiyada Ogadenia iyo xaalada uu shacabka Somalida Ogadenia kusuganyahay, masuuliinta Jaaliyada Denmark ee kulanka umatalaysay ayaa warbixino xasaasi ah oo hay,adaha xuquuqda aadamaha udooda ay kadiyaariyeen xaalada dhabta ah ee shacabka Somalida Ogadenia uu kusuganyahay lawadaagay Mr. Lykketoft, waxaana la,isdhaafsaday labada dhinac macluumaad xasaasi ah oo xoojinaysa wada shaqaynta iyo iskaashiga xaga arimaha banii,aadminimada ee kajirta dalka Ogadenia.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Denmark ayaa aad usoo dhaweeyay xogta ay masuuliinta Jaaliyadu usoo bandhigeen iyo heerka ay gaadhsiisantahay dhibaatooyinka joogtada ah ee Gumaysiga Itoobiya uu kuhayo bulshada kudhaqan wadanka Ogadenia. Warbixinadan oo aad ooga nixiyay madaxa Baarlamaanka Denmark ee kulankan kaqaybgalay ayaa aad usoo jiitay dareenkiisa iyo mudnaanta uu uhayo qadiyada Ogadenia.
kulamada noocan oo kale ah ayaan kucusbayn labada dhinac. Waxay Jaaliyada Somalida Ogadenia ee wadanka Denmark xidhiidh wanaagsan la leedahay dhamaan hay,adaha kala duwan ee kahawlgala Denmark sida Golaha Baarlamaanka iyo kuwo kale haba ku kala duwanaadaan barnaamijtooda iyo siyaasadooda.
Kulankan oo ahaa mid laga gaadhay ujeedadii loosoo agaasimay ayaa kudhamaaday guul iyo is afgarad labada dhinac ah, waxaana hoosta lagawada xariiqay xoojinta iyo iskaashiga labada dhinac ee ku,aadan sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha banii,aadminimo ee kajira Ogadenia beesha caalamka iyo wadamada deeqda bixiyana loo gaadhsiin lahaa gabood fallada uu Gumaysiga Itoobiya kuhayo shacabka biri magaydada ah ee Somalida Ogadenia.